अमेरिकामा परमाणु आक्रमण भए कहाँ लुक्लान् डोनाल्ड ट्रम्प !
२०७४ माघ २९ सोमबार २३:४५:००
बीबीसी । अमेरिकामाथि परमाणु आक्रमणको खतरा उत्पन्न भए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कस्तो सुरक्षित स्थानमा राखिएला ? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमेनदेखि ट्रम्पसम्मका सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुलाई यस्तो अवस्थामा बंकरमा बस्ने सुविधा रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि कति बंकर छन् ?
परमाणु परमाणु आक्रमणको खतरा उत्पन्न भए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई एक सुरक्षित स्थानमा राखिनेछ ।
सम्भावित आक्रमणको खतरालाई मध्यनजर गर्दै ह्वाइट हाउसमुनी सन् १९५० मा बंकर निर्माण गरिएको थियो । त्यस्तै भर्जिनियाको ब्लू रिज माउन्टेनमा माउन्ट वेदर नामक चुचुरोमा अर्को बंकर बनाइएको छ ।
अमेरिकाको जलसेना (नेवी) ले तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीका लागि ‘पीनट आइल्याण्ड’ नामक बंकर निर्माण गरेको थियो । यो बंकर फÞ्लोरिडाको पाम बीच हाउस नजिकै रहेको छ । जहाँ अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति केनेडी गइरहन्थे ।
राष्ट्रपति केनेडीका लागि ‘पीनट आइल्याण्ड’ मा बनाइएको उक्त बंकरमा रेडिएशनबाट बचाउने क्षमता थियो । पाम बीच हाउस र बंकरबीचको दूरी केवल १० मिनेटको रहेको बीबीसीले जनाएको छ । ९७ हजार अमेरीकी डलरमा निर्माण गरिएको यो बंकरलाई ‘डिटेचमेन्ट होटल’ पनि भनिन्छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पसँग पनि परमाणु आक्रमणबाट बच्न निजी बंकर रहेको छ । जुन फ्लोरिडामा रहेको ‘मार–ए–लागो’ नाम गरेको उनकी निजी सम्पतिमा निर्माण गरिएको छ ।
बंकरमा को–को जान सक्छन् ?
अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि सम्भावित परमाणु आक्रमणबाट बच्न पीनट आइल्याण्ड, ह्वाइट हाउस र माउन्ट वेदरमा गरी तीन वटा बंकर रहेका छन् ।
पीनट आइल्याण्डमा रहेको बंकरमा राष्ट्रपतिका साथ–साथै उनका झण्डै १२ जना सहयोगी र सचिव जान सक्छन् । यो बंकरमा २० जना मानिसहरु बस्ने स्थान छ ।
९/११ मा भएको आक्रमणका दौरान व्हाइट हाउस बंकरमा तैनाथ रहेका मरीन रबर्ट डार्लिंगका अनुसार अमेरीकी अधिकारीहरुले राष्ट्रपति समेत उन नजिक रहेका शीर्ष पदमा आसिन व्यक्तिहरुका लागि बंकरमा बस्ने व्यवस्था गरेका हुन्छन् ।
के परमाणु आक्रमणबाट बचाउ सक्छ बंकर ?
भर्जीनियाको माउन्ट वेदर आसपास रहने मानिसहरु यसलाई ‘डूम्सडे सिटी’ अर्थात प्रलयको दिन वाला शहर भन्दछन् । ब्लूमाउन्ट, भर्जीनियास्थित १७ सय ५४ फिट उचाईमा रहेको माउन्ट वेदर चुचुरोलाई राष्ट्रपति र उनका सहयोगीहरुका लागि बंकरमा परिणत गरिएको छ । माउन्ट वेदरको रेखदेख अमेरीकी ‘फेडरल इमरजेन्सी म्यानेजमेन्ट एजेन्सी’ अर्थात फेमाले गर्ने गर्दछ ।
वन नेशन अण्डरग्राउण्ड नामक पुस्तककी लेखिका कैनेथ रोज भन्छिन्, ‘‘यदी बंकरमाथि सोझै आक्रमण गरिए कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा काम लाग्दैन । त्यहाँ ऊर्जा र तापमान अत्यन्तै धेरै हुन्छ ।’’